अन्तिम पटक अाफ्नो प्रेमी अर्जुन कपुरलाई मलाइकाले पठाईन् यस्तो मेसेज ! – Online Khabar 24
अन्तिम पटक अाफ्नो प्रेमी अर्जुन कपुरलाई मलाइकाले पठाईन् यस्तो मेसेज !
मलाइका अरोडा यसपटक एक रियालिटी शोमा दिएको जानकारीका कारण चर्चामा छिन् ।​
कार्यक्रमकमा उद्घोषक मिलिन्द सोमनले मलाइकालाई ‘त्यस्ता तीनवटा कुरा भन्नुहोस् जसले तपाईंलाई कुनै पुरुषतर्फ आकर्षित गराउँछ’ भनेर सोधे ।
हाल नायक अर्जुन कपुरसँग सम्बन्धमा रहेकी मलाइकाले भनिन्,‘मलाई खासमा थोरै रफ (अव्यवस्थित) पुरुष मनपर्छ । मलाई साँच्चै नै त्यस्तै पुरुष मनपर्छ ।
चिल्ला होइनन् । भयानक तरिकाले फ्लर्ट गरोस् । मलाई यस्ता पुरुष मनपर्छ जसले राम्रो चुम्बन गर्न सकोस् ।’ यतिमात्रै होइन उनलाई ‘अर्जुनलाई अन्तिम पटक के मेसेज पठाउनुभयो ?’ भनेर सोधियो । यसमा मलाइकाले लजाउँदै भनिन्,‘आइ लभ यू टु ।’
यो पनिः गलत उपचारले नायिकाको यस्तो हालत
एजेन्सी । गलत उपचारका कारण चर्चित तमिल अभिनेत्री रायजा विल्सनको यस्तो हालत भएको छ । उनले सोशल मीडियामा एक स्क्रिन डाक्टर (त्वचा विशेषज्ञ) को लापरवाहीको कारण यस्तो अवस्था भोग्नु परेको भन्दै तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन् ।
उपचार पछि राइजाले आफ्नो अनुहारको अवस्थाको बारेमा त्वचा विशेषज्ञलाई बताउन खोन्ला उनी सम्पर्कमा नआएपछि थप रिसाएकी छन् । यस पोष्टमा त्वचा विशेषज्ञको नाम मेन्सन गर्दै उनलाई आफुलाई आएको समस्याका बारेमा बताएकी छन् ।
सार्वजनिक गरिएको फोटोमा, आँखामुनि सुनिएको अनुहारमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। फ्यानहरूले पनि ति डाक्टरसंग उपचार गराउँदा आफु पनि त्यस्तै समस्यामा परेको भन्दै आफ्ना तस्बिर उनलाई पठाएका छन् । त्यस्ता स्क्रीनशटहरू रायजाको इन्स्टाग्राम स्टोरीमा पनि साझेदारी गरिएको छ ।
उनी लेख्छिन् (मेरो इनबक्स ती व्यक्तिको सन्देशले भरिएको छ जसले उही उर्मोग विशेषज्ञसंग आफ्नो अनुहारको उपचार गरे र मैले जस्तै नियती भोगे । रायजा विल्सनले २०१७मा भेलाइल्ला पट्टाधारी २ का साथ अभिनयको शुरुआत गरेकी थिइन् । साभार गरियको खबर
Prevद्वन्द्वमा दुई छोरा गुमाएकि आमा – प्रचण्डले मेरा छोराको रगतको महत्त्व बुझेनन्
nextयस्तो ध’रा’पमा परेर मर्‍यो ‘मकुना’ हात्ती !